Azụmaahịa teknụzụ, n'adịghị ka teknụzụ ahịa, bụ ụzọ ngwaahịa na ọrụ na teknụzụ si edozi ndị ahịa. Ebe ụwa na ndụ anyị na - agagharị n'ịntanetị… ụzọ nke teknụzụ dị egwu, na - eduga ihe atụ nke etu esi aha ma zụọ ahịa.
O siri ike ịghara iche banyere ịzụ ahịa teknụzụ n’ekwughị Apple. Ha bụ ndị ọmarịcha ahịa ma na-arụ ọrụ ka mma n'itinye onwe ha n'ọtụtụ ahịa nwere ọtụtụ asọmpi… ma ha na-aga n'ihu na-enweta oke ahịa na uru. Isi na ahịa Apple anaghị ekwu maka ụgwọ na atụmatụ… kama ọ na-elekwasị anya na ndị na-ege ntị.
Mgbe m hụrụ mgbasa ozi ahịa Apple, ekwenyere m na nke ọ bụla na-agbada na echiche ole na ole:
ọcha - ọtụtụ mgbe, mkpọsa ọ bụla nwere otu ozi echere na ndị na-ege ntị… ọ bụghị karịa. Ihe onyonyo a di mfe, dika odi kwa. Ọ bụ ihe mara mma na Apple nwere naanị ọcha ma ọ bụ oji ojii black ka i wee lekwasị anya n’ebe ị ga-achọ ka ọ bụrụ.
Ihe Ùgwù - Apple bụ akara adịchaghị nke na-ewepụta ngwaahịa ndị mara mma ma mara mma. Ha na-eme gị chọrọ ịbụ akụkụ nke òtù nzuzo. Gwa onye ọrụ Apple ọ bụla na ha ga-ekekọrịta ụbọchị ha kwagara, ha agaghị eleghachi anya azụ.
Gaje Ịbụ - Apple na-arụkwa nnukwu ọrụ ọpịpị na psyche ya lekwasịrị anya. Mgbe ị hụrụ mkpọsa Apple, ị ga-amalite iche n'echiche ihe ị nwere ike ịmepụta na ngwaahịa ha.
Nke a bụ mgbasa ozi na-adịbeghị anya maka Ndụ (nke m zụtara n'oge na-adịbeghị anya):
Nke a bụ ike mgbasa ozi… kama ilekwasị anya na nsogbu, n'ọnọdu (nke Apple mere na Mac vesos PC mgbasa ozi), ma ọ bụ atụmatụ, Apple na-elekwasị anya na-ege ntị. Onye na-achọghị ike vidiyo nke ụfọdụ n'ụlọ fim na-atụgharị ha n'ime Hollywood-ịke mkpachị?
Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enweta nke a bụ site n'iji nlezianya ndị ahịa… mana Apple yiri ka ọ na-ezere nke ahụ. Naanị ha na-akụ mkpụrụ ahụ… ma kwe ka nchepụta nke ndị na-ege ntị mee nke ọzọ. Kedu ụdị mmetụta ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike ịbanye na ya? Kedụ ka ị ga - esi mee ka ịzụ ahịa gị karie ka ị gbanye mmetụta ndị ahụ?
Tags: apụl ahịaapụl ahịa usorousoro ahianwereohereọcha
Achọpụtara m nsogbu a ọ bụghị naanị na teknụzụ kamakwa n'ọtụtụ azụmaahịa. Ọtụtụ ndị ahịa taa nke ndị nwe ụlọ ahịa ka na-eche dịka ụgbụ azụ na ụlọ ọrụ na-eziga ozi sara mbara na-enwe olileanya na ọ ruru ahịa kwesịrị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, m na ụlọ ọrụ ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ ugbu a na-ere ahịa maka ụmụ akwụkwọ kọleji niile mana mgbe m mere nyocha ahịa, anyị chọpụtara na 80% nke ndị bi na ya bụ ndị obere na-adịbeghị anya si na ụlọ ndị ọzọ pụta n'ihi ọrụ ndị ahịa dara ogbenye na ụgwọ ọkụ dị elu. Anyị nwere ike ịmaliteghachi ịzụlite ozi ahịa na mgbasa ozi iji zube ahịa ahụ. Ahụla m nke a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Akwa blog.
Doug - ị nwere ike ị mechara mee m banye ide post blọgụ m pụtara ide.